Mashiinka Alxanka tuuboyinka, Mashiinka Beveling, Mashiinka Alxanka Orbital - Yixin
Waxay habeysaa MIG (FCAW / GMAW) habka alxanka, wuxuu ku habboon yahay in la miiro dhuumaha noocyada birta ee goobta. Dhumucda dhumucda la adeegsan karo waa 5-50mm (ka sarreeya -114mm).
On aasaasiga ah ee YX-150, waxay isku dhafan tahay tarooli alxanka la feedert alxanka, si weyn u badbaadiyo meel, sidoo kale si wax ku ool ah loo hagaajiyo xasiloonida alxanka.
Wax soosaarka la casriyeeyay ee YX-150PRO, oo ay weheliso wareejinta gacanta iyo tiknoolajiyada qoryaha, wuxuu dillaaci karaa dhuumaha dhumucda 5-100mm (ka sarreeya Φ125mm), waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha saliidda iyo gaaska.
Maaddaama mashiinka alxanka ee TIG (GTAW) otomaatig ah, wuxuu isku daraa tiknoolajiyada alxanka otomaatigga ah ee geesaha leh wuxuuna ku habboon yahay in lagu dhejiyo tuubooyinka dhuuban ee khafiifka ah ee noocyada birta.
Badanaa waxaa loo isticmaalaa farsameynta dusha jaban iyo fidsan ee wejiga dhamaadka biibiile biraha leh shuruudaha xagal kala duwan Waxaa looga baaraandegi karaa U, V iyo qaabab kale oo joomatari ah.
Wuxuu korsadaa habka alxanka ee TIG (GTAW) si loo miiro dhuumaha yar yar. Waxaad dooran kartaa mashiin ku habboon iyadoo loo eegayo dhexroorkeeda tuubbada.
Tayo Weyn, Waxqabad Sare, Waari kara oo Habboon
Marka loo barbardhigo alxanka gacanta, qalabkeenu wuxuu qaataa habka xayeysiiska magnetka, kaas oo ka bixi kara wadada, gacmaha bilaashka ah iyo xoogga, isla markaana bixin kara badeecooyin iyo adeegyo ka wanaagsan tan ku saleysan kharashka keydinta. Waxaan rajeyneynaa inaan ku siino xalka xirfadeena alxanka.
6-aad CNCEC ee goobta
dhammaan booska mashiinka alxanka dhuumaha otomaatiga ah oo leh saameyn alxamid qumman
12-ka CNCEC ee goobta
Biyo Siinta & Qasabadaha Tuuboyinka
Kaarboonka Buttom usheeda dhexe
Nadiifinta Birta Birta ah
Alxanka Xaaladda Hawada Alxanka
Alxanka Super-qaro weyn
Tianjin YIXIN waxaa la aasaasay 2010 inta badan waxay ku hawlanayd R&D, wax soo saarka iyo iibinta dhuumaha dhamaan qalabka alxanka tooska ah, waxayna bixisaa barnaamijyo hagitaan farsamo oo alxanka ah si ay uga caawiso macaamiisha xalinta dhibaatooyinka farsamada. Waxaan ku dhegannahay fikradda ah "Alaabooyinka taageerada farsamada adag, tayada sareysa ballaadhinta suuqa, adeegga daacadda ah si kor loogu qaado sumadeena" ayaa ku adkeysanaya macaamiisha xudunta u ah iyo hagidda suuqa…
Khibrad hodan ah xirfadle Adeeg Shahaadada
Xirfadle, heegan ah oo lagu kalsoonaan karo
iyada oo in ka badan 12 sano ay soo korayaan, yixin ayaa ku xeel dheer bixinta xalka ugu habboon ee alxanka. marwalba waxaan u heellan nahay baaritaanka si aan uga sii fiicnaano warshadaha alxanka. noqono xirfadle, heegan ah oo lagu kalsoonaan karo, markaa waxaan noqon karnaa kan ugu fiican.
Inta badan waxay ku hawlan yihiin R&D, soosaarka iyo iibinta dhuumaha oo dhan qalabka alxanka tooska ah, waxayna bixisaa barnaamijyo hagitaan farsamo oo alxanka ah si ay uga caawiso macaamiisha xalinta dhibaatooyinka farsamada.
Adeeg tayo leh
Waxaan ku dhegannahay fikradda ah "Alaabooyinka taageerada farsamada adag, tayada sareysa waxay ballaarisaa suuqa, adeegga daacadda ah si kor loogu qaado sumadeena" waxay ku adkeysaneysaa udub dhexaadka macaamiisha iyo hagitaanka suuqa, iyada oo loo marayo alaabooyin la isku halleyn karo oo hufan, adeegga mas'uul ka ah iibka kadib ...
Cinwaan sharafeedka ganacsiga sayniska iyo tikniyoolajiyadda, ISO9001, ISO14001, shahaadada OHSAS18001, cinwaanka sharafta leh ee shirkadda AAA ee sumcadda, Waxaan haynaa 5 xuquuq-lahaansho iyo in ka badan 10 xuquuqda lahaanshaha ...